मेयर बालेन साह क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा, विरामीसँग अन्तरक्रिया, निर्माणाधिन भवनको अनुगमन - Beemapost.com
मेयर बालेन साह क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा, विरामीसँग अन्तरक्रिया, निर्माणाधिन भवनको अनुगमन
२८ जेष्ठ २०७९, शनिबार १३:२८
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह शनिबार विहानै क्षेत्रपाटीस्थित क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको निरिक्षण तथा निर्माणाधिन भवनको अनुगमन गरेका छन् ।
क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको शनिबार विहान निरिक्षण गर्दै उनले शहरको बीच भागमा रहेको अस्पतालले सुभल मूल्यमा राम्रो सेवा प्रवाह भइरहेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । २०१३ सालमा स्थापना भएको क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको नव निर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत गरेका छन् ।
मेयर बालेन्द्र साहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तरक्रिया समेत गरे । अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तरक्रिया पश्चात उनले अस्पतालले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबाट असहाय, गरिव तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निःशुल्क रुपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरका मेयर साहले समुदायबाट चलेको अस्पताललाई महानगरले के गर्न सक्छ ? सहकार्य कसरी हुनसक्छ ? बार्षिक रुपमा सहयोग गर्ने वा के भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । मेयर साहले शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक एजेण्डा भएकोले सेवा नै हुनुपर्छ र व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने सोचले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।